Bit By Bit - ठूलो सहयोग सिर्जना गर्दै - 5.2.3 निष्कर्ष
मानव गणना तपाईं एक हजार अनुसन्धान सहायक गर्न सक्षम बनाउँछ।
मानव गणना प्रोजेक्टहरूले सजिलो कार्य-ठूला समस्याहरू समाधान गर्नका लागि धेरै गैर-विशेषज्ञहरूको काम जोड्दछ जुन कम्प्यूटरद्वारा सजिलै समाधान गर्न सकिदैन। तिनीहरू बिस्तारै सरल मिडियाोटसक्समा ठूलो समस्या तोड्न विभाजित-लागू-गठबन्धन रणनीति प्रयोग गर्छन् जुन बिना व्यक्तिहरूलाई विशेष कौशलहरू द्वारा हल गर्न सकिन्छ। कम्प्यूटर-सहयोग गरिएको मानव गणना प्रणालीहरूले मानव प्रयास बढाउनको लागि मेशिन सिकाइ प्रयोग गर्दछ।
सामाजिक अनुसन्धानमा, मानव गणना प्रोजेक्टहरू प्रायः परिस्थितिहरूमा प्रयोग हुने गर्दछन् जहाँ शोधकर्ताहरू वर्गीकरण, कोड वा लेबल छविहरू, भिडियो वा पाठहरू चाहन्छन्। यी वर्गीकरणहरू प्राय: अनुसन्धानको अन्तिम उत्पादन होइनन्; सट्टा तिनीहरू विश्लेषणको लागि कच्चा माल हुन्। उदाहरणका लागि, राजनैतिक मनिटरहरूको भीड-कोडिङ राजनीतिक छलफलको गतिशीलताको बारेमा विश्लेषणको भागको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी प्रकारको वर्गीकरण माइक्रोट्याक्सले राम्रो काम गर्ने सम्भव छ जब उनीहरूलाई विशेष प्रशिक्षण आवश्यक पर्दैन र सही जवाफको बारेमा विस्तृत सम्झौता भएमा। यदि वर्गीकरण कार्य अधिक विषयक हो - जस्तै, "यो समाचार कथा ब्योरा छ?" - त्यसोभए यो को लागी भाग लिन को लागी महत्त्वपूर्ण बन्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उनीहरु कुन कुराले ल्याउन सक्छ? अन्तमा, मानव गणना प्रोजेक्टको उत्पादनको गुणले इनपुटहरूको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ जुन मानव सहभागीहरूले प्रदान गर्दछ: कचरा, कचरा बाहिर।
तपाईंको इन्फुशन को निर्माण को लागि, तालिका 5.1 को अतिरिक्त उदाहरण प्रदान गर्दछ कि कसरि मानव गणना को सामाजिक अनुसन्धान मा प्रयोग गरिएको छ। यो तालिकाले, आकाशगंगा चिडियाघरको विपरीत, धेरै अन्य मानव कम्पन प्रोजेक्टहरू माइक्रो्रोटस्क श्रम बजारहरू (जस्तै, अमेजन मेक्सिको टर्की) प्रयोग गर्छन् र स्वयंसेवकहरूको सट्टा सशुल्क कामदारहरूमा निर्भर गर्दछ। जब म तपाईंको आफ्नै ठूलो सहयोग परियोजना सिर्जना गर्ने बारे सल्लाह प्रदान गर्दछु म सहभागी प्रेरणाको यस मुद्दामा फर्कनेछु।
तालिका 5.1: सामाजिक अनुसन्धानमा मानव संकलन परियोजनाहरूको उदाहरण
राजनैतिक पार्टी मञ्चोस कोड पाठ माइक्रोकोस्क श्रम बजार Benoit et al. (2016)
200 अमेरिकी शहरहरूमा आधिकारिक विरोधमा समाचार लेखहरूबाट घटना जानकारी निकाल्नुहोस् पाठ माइक्रोकोस्क श्रम बजार Adams (2016)
समाचारपत्र लेख वर्गीकृत गर्नुहोस् पाठ माइक्रोकोस्क श्रम बजार Budak, Goel, and Rao (2016)
विश्व युद्ध 1 मा सैनिकहरूको डायरीबाट घटना जानकारी निकाल्नुहोस् पाठ स्वयंसेवकहरू Grayson (2016)
नक्शाहरूमा परिवर्तन पत्ता लगाउनुहोस् छविहरू माइक्रोकोस्क श्रम बजार Soeller et al. (2016)
एल्गोरिदमम कोडिङ जाँच गर्नुहोस् पाठ माइक्रोकोस्क श्रम बजार Porter, Verdery, and Gaddis (2016)
अन्तमा, यस खण्ड शो मा उदाहरणहरू मानव गणना विज्ञान मा एक democratizing प्रभाव सक्नुहुन्छ। Schawinski र Lintott तिनीहरूले ग्यालेक्सी चिडियाघर सुरु गर्दा स्नातक विद्यार्थीहरू थिए, सम्झनुहोस्। पूर्व डिजिटल उमेर, वर्गीकरण गर्न एक परियोजना एक लाख ग्यालेक्सी वर्गीकरण धेरै समय र पैसा राम्ररी आर्थिक सहायता र रोगी प्राध्यापकहरू लागि यो केवल व्यावहारिक हुने थियो कि आवश्यक थियो। त्यो अब साँचो हो। मानव गणना परियोजनाहरू धेरै गैर-विशेषज्ञहरु को काम सजिलो-कार्य-ठूलो-मात्रा समस्या समाधान गर्न संयोजन। अर्को, म ठूलो सहयोग पनि पनि शोधकर्ता आफु छैन सक्छ विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने समस्या, विशेषज्ञता लागू गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने छौँ।